Liiska: 5-ta Ciyaaryahan Ee Ugu Sareysa Tartanka Loogu Jiro Kabta Dahabka Yurub
HomeWararka CiyaarahaLiiska: 5-ta ciyaaryahan ee ugu sareysa tartanka loogu jiro Kabta Dahabka Yurub
May 18, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain 0
Ku soo dhawaada Xubinteena Ciyaaryahanka oo Galab walbo aan ku soo qaadano Qodob Muhiim ah bahda Ciyaaro.com ayaana ku eegtay taariikho Hore iyo kuwa hada taagan maanta waxaa ku soo qaadaneynaa 5 Ciyaaryahan ee ugu sareeya Kubada Dahabka iyo Goolasha ay leeyihiin.
Kabta Dahabka Yurub waxaa la siiyaa ciyaaryahanka dhaliya goolasha ugu badan horyaalada kooxaha ugu waa weyn Yurub. Ciro Immobile ayaa abaalmarintan ku guulaystay sanadkii 2020 halka uu Lionel Messi ku guulaystay 3 kabo oo Dahab ah sanadihii ka horayyay.
Abaalmarinta waxaa la siiyaa iyada oo ku saleysan dhibcaha lagu kasbaday goolasha la dhaliyay inta lagu gudajiray xilli ciyaareedka. Miisaanka dhibcaha dhibic kasta ayaa doorbidaya shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Aynu eegno shanta laacib ee ugu sareysa tartanka loogu jiro kabta dahabka ee xilli ciyaareedka 2020-21
# 5 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 26 gool
# 4 Andre Silva (Eintracht Frankfurt) – 27 gool
#3 Cristiano Ronaldo (Juventus) – 29 goals
#2 Lionel Messi (Barcelona) – 30 goals
#1 Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 40 goals